Manomboka difotry ny fanatontoloana ny kolontsaina sy ny zavakanto ary ny fomba malagasy. Toa zary malaza tsy hihinanana tahaka ny viliantsahona sisa izy ireny. Na zary vakoka any am-bata ka rehefa hirehareha sy hidedaka eo anatrehan’ny hafa, fa Malagasy vao mandrangaranga izany. Mitaky ezaka lehibe izay vao mety ho tafaverina hiaina indray ny kolontsaina sy ny zavakantony ary ny fombany ny Malagasy.
… Ary raha hamoahana lalàna moa ny fampahafantarana sy fampitiavana ny Malagasy ny kolontsainy sy ny zavakantony, ny fombany ? Sady haingana io no mety hahahomby raha toa ka arahina fahamatorana (matotra) ny fampiharana azy. Tsy lalàna hanafay ihany fa lalàna hitondra vitrika sy hampirisika ny Malagasy hibanjina ny maha izy azy indray.
Ohatra, havoaka ny lalàna (izay ilazana azy eo amin’ny sehatra isan-karazany, tsy maninona) fa : « omena fanampiana tahaka izatsy na izaroa izay sekoly na fikambanana mampianatra na mitaiza ny zaza sy ny ankizy amina kolontsaina malagasy ». Ohatra hafa, mandoa onitra (na manao asa maimaimpoana ho an’ny fiarahamonina) ireo tratra manimba vakoka, sns.
Tanjona ny hahafahan’ny Malagasy mahatsapa sy miaina ny maha Malagasy azy ka hampifanaraka izany amin’ny vanim-potoana misy. Mety ho mafy sy ho sarotra ny lalana izorana amin’izany, saingy rehefa izay ve no heverina fa handalan’ny Malagasy indray ny momba azy, tsy aleo henjanina ny lalàna ?
… Lalàna henjana ve vao hampitodika ny sain’ny Malagasy ka hahatsapany indray fa tsy Amerikanina na Frantsay na Afrikanina, izy ? Amin’ny alalan’ny famoahana lalàna henjana ve vao hahatsiaro indray ny malagasy fa « aza ny lohasaha mangina fa Zanahary an-tampon’ny loha » ?
Handala ny maha Malagasy noho ny tahotra ny iharan’ny lalàna ? Hafahafa ihany. Hiandry fotsiny amin’izao, ho difotra anaty fanatontoloana. Sanatria ho very tanindrazana tanteraka ka hidian’ny « sasany » anaty faritra voaaro sy voafefy. Na, sanatria ho lasa « Rajakom-bazaha » avokoa ny taranaka malagasy !